Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo WFP oo heshiis is-fahan ah kala saxiixday - Jowhar Somali news Leader
Home News Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo WFP oo heshiis is-fahan ah kala saxiixday
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo WFP oo heshiis is-fahan ah kala saxiixday
Dowladda Soomaaliya iyo Barnaamijka Cuntada Aduunka ee loo soo gaabiyo (WFP) ayaa kala saxiixday heshiis is faham ah kaas oo Dalka dhan loogu sameynayo xarumaha digniinaha xilliga hore ee halis- wadareedyada.
Wasaaradda Gagaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Dowladda Soomaaliya oo dadaal xooggan uga jirta maareynta iyo yareynta qattaraha Musiibooyinka ayaa ku guuleysatay in ay qabato mid ka mid ah hal- beegyada ugu muhiimsanaa ee looga fadhiyay Wasaaradda
Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Md Xamsa Saciid Xamsa iyo Madaxa ugu sarreeya hey’adda qeybteeda Soomaaliya Md. Ceysar Arroyo ayaa labada dhinac u saxiixay heshiiska.
Heshiikan ayaa ah sidii loo xoojin lahaa loona abuuri lahaa xirfadda iyo agabka loo baahanyahay si Soomaaliya ay awood ugu yeelato in laga sii digo qataraha musiibooyinka ka hor inta aanay dhincin Isfahamka ayaa dhigaya in dhammaan Dowlada Gobaleedyada iyo Maamulka Gobalka Banaadir loo sameeyo xarumaha sii darsa halis-wadareedyada bixiyana digniinaha ka hor inta aanay qatarta soo dhawaan.
Md Xamsa Saciid Xamsa Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Soomaaliya waxa uu sheegay in sammeynta xarumaha ka sii digo qataraha ay dowr weyn ka cayaari doonto in la xakameeyo qasaaraha ka dhasha musiibooyinka soo noq noqda ee dalka ka dhaca.
“Abuurista iyo kobcinta xarumaha ka sii diga halis-wadareedyada waxay noo sahleysaa in aan awood u yeellanno in aannu ka jawaabno, yareyno isla markaasna aan maareyno musiibooyinka”. Ayuu yiri.
Xamsa Saciid Xamsa Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyina Soomaaliya Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu Wasiir Xamsa Sheegay in Wasaaraddiisa ku dadaaleyso sidii dalka uu uga gudbi lahaa Musiibooyinka soo noqnoqda loona gaari lahaa xal waara.
Dhiniciisa Agaasimaha WFP Soomaaliya Md Ceysar Arroyo ayaa sheegay in QM diyaar u tahay in ay ka taageerto Wasaaradda dhinacyada dhismaha kaabayaasha loogu tala galay maareynta iyo yareynta qattaraha musiibooyinka.
Md Arroyo wuxuu sheegay in heshiiska oo socon doono muddo lix bil ah ay ka shaqeyn doonaan sidii uu u soo saari lahaa xirfadlayaal iyo xarumo awood u leh in ay sii saadaaliyaan kana sii digaan halis- wadareedyada.
Heshiiskan oo seddex geesood ah waxaa dhinaca dhaqaalaha ka taageeraya hey’adda Sacuudiga laga leeyahay ee loo yaqaanno King Salman Foundation.
Ugu dambeyn Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Soomaaliya ayaa u mahad celiyay labada hey’adood howsha ay ka taageerayaan dalka Soomaaliya.